Akhri: Shirkada Turkiga ah ee maamusha dekeda Muqdisho oo kalsooni doon ah (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Shirkada Turkiga ah ee maamusha dekeda Muqdisho oo kalsooni doon ah (Sawirro)
Mareeg.com: Shirkadda Al-Bayrak ee maamusha dekedda Muqdisho ayaa warbixin kazoo saartay mudadii bisha aheyd ee ay maamuleysay dekedda, iyadoo xustay iney maamulka dekedda ka sameysay horumar weyn.
Maareeyaha guud ee Shirkadda Al-Bayrak ee dalka Turkiga Mustafa Levent Adali ayaa warbixintiisa ku sheegay in Dekadda ay ku talaabsatay horumar la taaban karo, waxaana uu intaa ku daray in lacag dhan $1.582,000 milyan oo doolar (Hal milyan shan boqol sideetan iyo labo kun) ay ku wareejiyeen Maamulka dekadda ee dowladda Soomaaliya, taasi oo uu ku sheegay inay tahay horumar la gaaray mudadii bisha aheyd ee ay dekekadda maamulayeen.
Warbixinta ayaa lagu xusay in horumarka dhaqaale ee dekaddu ku talaabsatay uu imaanayo, iyadoo qarashkii ganacsatadu ku bixin jireen dekadda aan kor loogu qaadin, ayna u sameeen qiimo dhimis, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in dhaqaalaha dekadda ee dowladda uga soo xaroonaya uu si weyn u sii kordhi doono mustaqbalka dhaw, isla markaana ay dekadda mar dhaw noqon doonto mid casri ah.
“Kunteenarka 40feet ah la bixin jiray $600, waxaana hoos u dhignay in ka badan 11%, waxaana hadda la bixiyaa $540 oo kaliya, kunteenarka 20feet waxaa la bixin jiray $400 hadda waxaa la bixiyaa $350, waa qiimo dhimis ka badan 14%, Sonkorta waxaa la bixin jiray tankii $17 doolar, halka hadda aan ka dhignay $16.8 tankiiba” ayuu yiri Mustafa Levent
Shirkadda Albeyrak ayaa sheegtay in mudadii bisha aheyd ee ay maamuleysay Dekeda Muqdisho ay ciidamada Booliska iyo Nabadsugida ay qabteen qalab ciidan oo si sharci ah uu dalka ku soo galayay, waxaana uu uga mahad celiyay dadaalkooda iyo wada shaqeyntooda.
Markii shirkadani bishii hore la wareegeysay dekedda ayaa waxaa ka dhashay buuq farabadan, iyadoo la ogyahay in baarlamaanka Soomaaliya uu diiday in shirkadani dekedda maamusho bihsii April ee sanadkan 2014.
Mooshin xildhibaanada qaar isku dayeen iney shirkadaan ka diyaariyaan bishii Septenmber ee lasoo dhaafay ayaa hakaday, iyadoo markaasna gudoonka baarlamaanku xukuumadda weydiistay iney soo cadeyso sababta loo hareer marray diidmadii baarlamaanka ee shirkadaas.
Shirkadda Al-Bayrak oo laga yaabo in arrinteeda markale la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya, ayaa u muuqata iney guuleysan doonto maadaama hal bil oo kaliya ay lacag lama filaan ah dowladda uga soo xareysay dekeda Muqdisho oo la rumeysan yahay in la kala booby jiray dhaqaalaha kazoo baxa, wax-yarna loo gudbin jiay qasnadda dowladda.